यसरी गरौं, अङ्गुरको व्यवसायिक र बैज्ञानिक खेती – NewsAgro.com
June 9, 2017 June 11, 2017 newsagro Agriculture Online newsagro.com न्युज एग्रो डट कम, Horticulture, अङ्गुर, अङ्गुरको व्यवसायिक र बैज्ञानिक खेती, फलफूल, यसरी गरौं, शनिबार विशेष : आफु बुझौ र अरुलाई पनि सिकाऔं
यो समाचार 5249 पटक पढिएको
शनिबार विशेष : आफु बुझौ र अरुलाई पनि सिकाऔं
• शान्ता सिंखडा
सरकारले गत् आर्थिक बर्ष २०७०।७१ को बजेटदेखि कृषितर्फ ठूलो बजेट बिनियोजन गर्दैआएको छ । यसको अर्थ हो, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बिस्तारै गम्भिर पेशाको रुपमा बुझ्नु । पछिल्लो समयमा कृषिबाटै करोडपति हुने कर्मशिल व्यक्तित्वहरु बढ्दै गइरहेका छन् । भविष्यमा यो क्रम अझ बढ्ने छ । स्वास्थ्यका लागि मात्रै होइन, सम्वृद्धिका लागि पनि फलफूलको उत्तिकै महत्व छ । फरक यति हो, स्वास्थ्यका लागि फलफूल खाइन्छ, समृद्धिका लागि यसको खेती । सफल फलफूल खेती कृषिमै रमाउनेहरुका लागि केन्द्रित गरी तयार पारिएको उपयोगि पुस्तक हो । यसले फलफूल खेती सफलतापूर्वक गर्नका लागि सुत्र दिएको छ ।
फलफूल खेतीका लागि जानकारहरुका लागि यो लेख उपभोगी त छँदैछ, फलफूल खेती गर्नेबारे सोचिरहेका, खेतीको तयारीमा लागेकाहरुका लागि पनि यो लेख उत्तिकै आवश्यक छ । सानोतिनो लगानीबाट गर्न सकिने फलफूल खेतीदेखि ठूलो लगानी गर्न उत्साहित फलफूल कृषकहरुका लागि चाहिने सबै किसिमका जानकारीहरु यस पुस्तकले समेटेको छ । पुस्तकले ती फलफूलका बारेमा मात्र चर्चा गरेको छ, जुन नेपालमा खेती गर्न उपयुक्त छन् । पुस्तकमा कमी कमजोरीहरु हुन सक्छन् । तसर्थ औल्याउने जिम्मा तपाईहरुलाई ।
यसको उत्पत्ति मध्य–एशियामा भएको हो भन्ने वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । नेपालमा २०४४/४५ मा केन्द्रीय वागवानी केन्द्र कीर्तिपुरमा जापानी सहयोगमा जापानीज अङ्गुर जात अनुसन्धानका लागि रोपियो । पछि कुन जात कुन हावापानीमा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उक्त केन्द्रबाट सिफारिस गरिएको जात मात्र जिल्ला–जिल्लामा वितरण भएपछि आजभोलि यसको खेती बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।
हावापानी तथा समय
डिलाइट– ताजा फल खानको लागि यो निकै उपयोगी हुन्छ । चाँडै पाक्दछ ।
पर्लेट– यो बीऊरहित वर्णशंकर जात हो । केही चाँडो पाक्दछ । फलको गुदी नरम र बास्नादार हुन्छ । झुप्पामा फल पाकिसक्दा पनि केही फल भने काँचै रहन्छन् ।
थमसन सिडलेस– ताजा फल खान उपयुक्त हुन्छ । फल पाक्दा सुनौलो पहेँलो रङ्गको हुन्छ । फल बीऊरहित, स्वादिलो हुन्छ । भण्डारण क्षमता बढी हुन्छ ।
हिमरड सिडलेस– बीऊरहित उच्च कोटीको फल लाग्दछ । उत्पादन बढी हुन्छ । रोग तथा कीरालाई सहन सक्दछ । फल पाक्दा हरियो पहेँलो रङ्गको, बोक्रा अलि कडा किसिमको छालाजस्तो हुन्छ ।
क्योहो– राम्रोसँग फल लाग्दछ । बोट पनि ठूलो हुन्छ । फलको तौल १० ग्रामसम्म हुन्छ । फल पाक्ने समयमा बढी पानी परेमा फल फुट्न सक्छ । साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा पाकी सक्दछ ।
ओलम्पिया– यो हाइब्रिड समूहमा पर्ने जात हो । फलको साइज ठूलो हुन्छ । फलको रङ्ग आकर्षक र स्वादिष्ट हुन्छ ।
सिचाई, गोडमेल तथा काँटछाँट
सेतो धूले रोग– यो अङ्गुरमा बढी लाग्ने रोग हो । शुरुमा कमला डाँठ, पात, फूल तथा फलमा खरानी रङ्गको धूलो देखा पर्दछ । रोगी भाग सुक्दछ । पात तथा फल झर्दछ । बोटमा भएको फल पनि राम्रोसँग पाक्दैन र कडा हुन्छ । फलको बोक्रा फुट्दछ ।
– गन्धकको धूलो बोटमा छर्ने ।
– केराथेन (०.१%) विषादी हप्ता दश दिनको फरकमा ३–४ पटक छर्ने ।
– माघ या वैशाखमा २ पटक क्यालिसिन २ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
शीते ढुसी रोग– पातमा सेतो फोकाजस्तो दाग देखिन्छ । पात सुक्दछ । मुनासमेत मर्दछ ।
– बोर्डोमिक्स्चर या पोलिराम ४ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा राखी स्पे्र गर्ने ।
– रोगग्रस्त पात तथा फल जम्मा पारी नष्ट गर्ने ।
खैरो थोप्ले रोग– पात, डाँठ तथा फलमा खैरा दाग देखिन्छन् । फल कमसल हुन्छ । वर्षा भइरहेको अवस्थामा यो रोग बढी फैलन्छ । वर्षा कम हुँदा रोगको आक्रमण पनि कम हुन्छ ।
– रोग लाग्नुभन्दा पहिला चैत्र–वैशाखमा बोर्डोमिक्स्चर छर्ने ।
– बेभिष्टिन २ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
– डाइथेन एम–४५ विषादी २ देखि ३ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
– क्याल्सियन नाइट्रेट १ प्रतिशत छर्ने ।
फट्के कीरा– यो सानो खालको खपटे कीरा हो । यसले नयाँ पालुवा तथा मुनामा प्वाल बनाएर क्षति पु¥याउँछ ।
– मालाथायन २ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
थ्रिप्स– पातको तल्लो सतहबाट रस चुसेर खान्छ । जसको कारण पात पहेँलिन्छ र झर्दछ ।
– मालाथायन २ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई १० दिनको फरकमा २–३ पटकसम्म छर्ने ।
– रोगर १.५ मि.लि. वा सेभिन २.५ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई १० दिनको फरकमा २–३ पटक छर्ने ।
पात छिया पार्ने खपटे– यस्ता कीराले बिरुवाका पात खान्छन् । पातलाई खानुभन्दा बढी काटेर नोक्सान पु¥याउँदछन् । यसका लाभ्रेले माटोभित्रका स–साना जराहरु खाइदिन्छन् ।
– बत्तीको पासोमा आकर्षित गरेर मार्न सकिन्छ ।
– मालाथायन र बोटमा मेटोसिडको प्रयोग गर्ने ।
– कीरालाई हातले टिपेर मार्ने ।
पात बेरुवा– यी कीराले पातको हरियो भाग खान्छन् । पातभित्र बेरिएर बस्दछन् ।
– कीरा लागेको पातलाई नष्ट गरिदिने ।
– थायोडिन २ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
कत्ले– बोक्रामा सुँड गाडेर रस चुस्छ । बोट कमजोर हुन्छ ।
– कीरा लागेको भागहरु हटाइदिने ।
– रोगर १.५ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
फल तयार हुन लाग्ने समय
← राजधानीमा दूध डेरीसम्बन्धी तालिम सम्पन्न
कुलो निर्माणसँगै रुडीमा सात वर्षपछि रोपाइँ →
कागजमै सीमित कृषि बिमा कम्पनी